यी ७ बलिउड स्टारको भ्यानिटी भ्यान गुड्ने महल भन्दा कम छैन, सबैभन्दा आलिशान कसको ? [तस्विर] – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Bollywood News & Updates/यी ७ बलिउड स्टारको भ्यानिटी भ्यान गुड्ने महल भन्दा कम छैन, सबैभन्दा आलिशान कसको ? [तस्विर]
यी ७ बलिउड स्टारको भ्यानिटी भ्यान गुड्ने महल भन्दा कम छैन, सबैभन्दा आलिशान कसको ? [तस्विर]
एजेन्सी – बलिउड कलाकारहरु शुटिंगको लागि टाढा-टाढा पुग्छन्। त्यहि कारणले गर्दा आफ्ना सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा होस् भनेर बलिउड कलाकारहरु भ्यानीटि भ्यानको प्रयोग गर्छन्।
भ्यानीटि भ्यानमा कलाकारहरु आफ्नो आवश्यकता र सुविधाका सामानहरु बोकेर हिड्छन्। शुटिंग पछिको खाली समयमा र अन्य समयमा कलाकारहरु सोहि भ्यानीटि भ्यानमा आराम गर्छन्।
सबै भन्दा महँगा र आलीशान भ्यानीटि भ्यान भएका बलिउड कलाकारहरु निम्न छन्।
शाहरुख खान : बलिउडमा किंग खान भनेर चिनिने शाहरुखले प्रयोग गर्ने भ्यानीटि भ्यान धेरै नै आलीशान र लग्जरी छ। शाहरुख १४ मीटर लम्बाई भएको Volvo9BR बस प्रयोग गर्छन्। यस भ्यानमा ४ कोठा छन् भने यसमा एक जिम पनि छ। सन् २००५ मा यसको मूल्य ४ करोड भारतीय रुपैया थियो। अहिले यो मूल्य कयौं गुणा बढिसकेको छ।
सलमान खान : सलमान खान धेरै नै स्टाइलिश भ्यानीटि भ्यान प्रयोग गर्छन्। भ्यान भित्र सलमानको एक ठूलो तस्विर राखिएको छ। सलमान यस भ्यानलाई कहिँ टाढाको शुटिंग मा जाँदा प्रयोग गर्ने गर्छन्। आउटडोर शूटिंगमा हुँदा खाली समयमा उनी आफ्नो भ्यानिटी भ्यान भित्र बसेर आराम गर्ने गर्छन्। यस भ्यानिटी भ्यान भित्र एक ठूलो किंग साइजको बेड राखिएको छ। बेड रुमको अलावा यस भ्यानमा रिहर्सल रूम, मीटिंग रूम पनि छन्।
ऋतिक रौशन : बलिउडका चर्चित नायक ऋतिकको भ्यानीटि भ्यान अरु भन्दा धेरै फरक छ। उनको भ्यान १२ मिटर लामो छ। भ्यानको एक हिस्सामा अफिस छ, अर्को भागमा ५२ इन्च टेलिभिजन सहितको लाउंज छ।
वरुण धवन : वरुणको भ्यानीटि भ्यान अन्यको भन्दा सामान्य छ। ताम-झाम मन नपर्ने भएकै कारण उनले आफ्नो भ्यानमा जरुरतका सामानहरु मात्र राख्छन्। वरुणको अघिल्लो भ्यान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो।
अजय देवगन : एक्शन हीरो अजय देवगनको भ्यानीटि भ्यान बाहिरबाट देख्दा ठ्याकै स्पोर्टस कार जस्तै देखिन्छ। खासमा अजयको भ्यान एक गुड्ने जिम-खाना भन्दा कम छैन। यहाँ अजय शूटिंगको समयमा व्यायाम गर्छन्। यस्तै यस भ्यानमा सुख-सुविधाको पनि राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। जिमको अलावा यसमा किचन, बेडरुम र रेस्टरूम पनि छन्।
आलिया भट्ट : बलिउडमा छोटो समयमा स्थापित हुन सफल भएकी आलिया धेरै नै व्यस्त नायिकामा पर्छिन्। आलियाको भ्यानीटि भ्यान उनको व्यक्तित्व झल्काउने किसिमको छ। आलियाको भ्यान रंगीन छ। आलियाले स्टूडेन्ट अफ दी ईयर, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, डियर जिन्दगी र कलंक जस्ता चलचित्रमा काम गरिसकेका छन्।
संजय दत्त : संजयसँग १२ मिटर लामो भ्यानीटि भ्यान छ। संजयले Volvo B7R भ्यानीटि भ्यान बनाउनको लागि संजयले ३ करोड खर्च गरेका थिए। धेरै निपूर्ण तरिकाबाट तयार पारिएको यस भ्यान Airoforce 1 बाट प्रभावित भएर तयार पारिएको छ। रक गीतका शौखिन रहेका संजयले एक पटक विदेशी ब्याण्ड AXL Rose मुम्बई आउँदा प्रयोग गर्न दिएका थिए।
खुल्यो अर्को रहस्य ! सु`शान्तको मृ`त्यु पहिल्यै विकि`पिडियाले दिएको थियो अपडेट !